कुन राशीका व्यक्तिले कुन रंगसँग होली खेल्ने ? - Nepali Virals
८ चैत्र २०७२, सोमबार १६:३५	2,981 पटक-पढिएको
रंगहरुको पर्व होली मंगलबार धुमधामका साथ मनाईदै छ । बिभिन्न संघ संस्था र क्लबहरुमा आजै होली मनाइसकेका छन् । बाटोमा लोला हान्नेहरुलाई त एक हप्ता अघि देखि नै होली लागेको थियो । होली रमाइलोको पर्व मात्रै होइन यसका केही धार्मिक मान्यताहरु पनि छन् ।
असत्यमाथि सत्यको जितको प्रतिकका रुपमा मनाइने होलीको आफ्नै कथा छन् । हाम्रो राशी अनुसारको रंगसँग होली खेल्दा हामीलाई सुख समृद्धि र फलदायि हुुन्छ भन्ने मान्यता छ । यहाँ केही धार्मिक शास्त्रहरुमा उल्लेख भए अनुसार कुन राशीका व्यक्तिले कुन रंग प्रयोग गरि होली खेल्दा राम्रो हुन्छ भन्ने ’boutमा केही जानकारी दिने कोसिस गरेका छौ ।
मेष वा वृश्चिक राशी
मेष तथा वृश्चिक राशीको स्वामी मंगल हुन् । मंगलको रंग रातो हो र उनको पूजा पनि रातो पूजा सामाग्रीले नै हुने गर्छ । त्यसैले मेष या बृश्चिक राशी भएकाले रातो रङसँग होली खेल्नु अति लाभदायक मानिन्छ । यस राशीका मानिसलाई मान सम्मान मिल्ने तथा क्रोधको नियन्त्रण हुन्छ । भूमीलाभ हुन्छ, ऋणबाट मुक्ति मिल्छ ।
वृष र तुला राशी
वृष र तुला राशीको स्वामी शुक्र हुन् । नवग्रह मध्ये शुक्र सबैभन्दा चम्किलो ग्रह हो । वृष र तुला राशी भएका मानिसले होलीमा सेतो रंगको कपडा लगाएर होलीमा पँहेलो र आकाशेरंगको प्रयोग गर्न सक्छन् । यसले बैभव प्राप्ती हुन्छ । विलासितापुर्ण जीवनको आनन्द उठाउन सक्छन् । साथीभाई र परिवारबाट सम्मान मिल्छ ।
मिथुन र कन्या राशी
यी दुई राशीका स्वामी बुध हुन् । बुध बुद्धि एवं वाणीसँग सम्बन्धित ग्रह मानिन्छ । ज्योतिषका अनुसार बुध हरियो रंगको प्रतिनिधि ग्रह हो । मिथुन र कन्या राशी भएका मानिसले होलीको दिन विहानै गाईलाई हरियो घाँस खुवाउनु पर्दछ । हरियो रंगसँग होली उत्सव मनाउनु पर्छ । यसको प्रभावले व्यापार एवं जागिरमा सम्मानजक उपलब्धि प्राप्त हुनेछ । मान सम्मान पनि मिल्नेछ ।
कर्कट राशीको स्वामी चन्द्रमा हुन् । चन्द्रमा मन एवं धनसँग सम्बन्धित ग्रह मानिन्छ । जो पूर्णरुपमा सेतो तथा सफा हुन्छ । कर्कट राशीका मानिसहरुले सेतो फूलले शिवको पुजा गरेर पँहेलो, केशर तथा हरियो रंगसँग होली खेल्दा फलदायी हुन्छ । जसले गर्दा उनीहरुलाई धन तथा सुख बृद्धि हुन्छ । हरियो रंगले शान्ति प्रदान गर्छ । सन्तानको सुख मिल्नेछ साथै समाजमा सम्मान मिल्छ ।
सिंह राशीको स्वामी सुर्य हुन् । सुर्य सबै ग्रहको पनि स्वामी मान्छिन्छन् । रातो, पँहेलो, बैजनी एवं सुन्तला रंग सुर्यसँग सम्बन्धित रंग हुन् । सिंह राशी भएकाले होलीको दिन विहान सुर्यलाई रातो गुलाव मिश्रित पानीको अर्घ दिएर रातो रंग सँग होली खेल्नु पर्छ । यसले गर्दा अत्यधिक उर्जा प्राप्त हुनेछ । शरीरमा शक्तिको संचार हुन्छ । बुद्धि प्रखर हुनेछ ।
धनु वा मिन राशी
धनु एवं मीन राशीका स्वामी गुरु हुन् । गुरुलाई धर्म, शुद्ध आचरण, सात्विक प्रवृति एवं अत्यधिक धन प्रदाता ग्रह मानिन्छ । धनु तथा मीन राशी भएका मानिसहरुले होलीका दिन विहान भगवान शंकरलाई पँहेलो बेसारको गाँठोले पुजा गर्नु पर्छ । तथा गरीबलाई भोजन गराउनु पर्छ । होलीमा उनीहरुले पँहेलो रंगको प्रयोग गर्नु लाभ हुन्छ । जसले गर्दा उनीहरुलाई मान सम्मान मिल्ने तथा सफलता प्राप्त हुन्छ ।
मकर तथा कुम्भ राशी
मकर एवं कुम्भ राशीको स्वामी शनिदेव हुन् । शनि न्यायप्र्रिय एवं मन्द गतीको ग्रह मानिन्छ । जसको रंग निलो हुन्छ । शनि सात्विक एवं धामिर्क प्रवृत्तिको व्यक्तिलाई कहिले कष्ट दिदैनन् भन्ने मान्यता छ । मकर एवं कुम्भ राशी भएका मानिसहरुले होलीमा नीलो, सेतो, कालो तथा खैरो रंगको प्रयोग गर्दा लाभदायक हुन्छ ।
यो पढ्नु भयो
भारतीय रुपैया अब अनलाइनबाटै डाउनलोड !
अघिल्लो भारतीय रुपैया अब अनलाइनबाटै डाउनलोड !
पछिल्लो ७ फोटोमा हेर्नुहोस् होली हंगामा